Mercedes သည် New Mercedes-Maybach S-Class အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Mercedes သည် Mercedes-Maybach S-Class အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
21 / 11 / 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 6
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်စတင်ချိန် မှစ၍ Mercedes-Maybach S-Class ၏နမူနာပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ခန့်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ယူနစ် ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် Mercedes-Maybach S-Class ကားများကိုယခင်ကထက်ရောင်းချခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုနှုန်းသည်နှစ်ဆဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရုရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်နှင့်ဂျာမနီတို့မှာအဓိကရောင်းအားများဖြစ်သည်။ Mercedes-Maybach S-Class အသစ်သည်ဒီအောင်မြင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
နောက်ဘီးကိုလုံး ၀ အကျိုးသက်ရောက်စေသော Mercedes-Benz S-Class ၏ရှည်လျားသောမူကွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘီးသည် ၁၈ စင်တီမီတာပိုရှည်သည်။ အလုပ်အကိုင်နေရာထိုင်ခုံများကိုစံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Chauffeur အထုပ်အနေဖြင့်လည်းကောင်းနောက်ဘက်အပိုင်းသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်သို့မဟုတ်အနားယူရန်နေရာဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုရှေ့ထိုင်ခုံ၏နောက်ဘက်နှင့်နောက်ခရီးသည်နှစ် ဦး အကြားတိကျသောအကျယ်ချဲ့သောနေရာများကဲ့သို့သောသီးသန့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ စျေးကွက်အတော်များများတွင် Mercedes-Maybach S-Class ကိုယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောင်းချမည်။
Mercedes-Maybach S-Class (အရှည် / အကျယ် / အမြင့်: ၅၄၆၉/၁၁၁၁၁၁၁ မီလီမီတာ) သည်ဂန္တဝင်သုံးသေတ္တာ sedan ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများမှာ chromed fin နှင့်ထူးခြားသော bonnet နှင့် Mercedes-Maybach radiator grille တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ဒေါင်လိုက်သုံးဖက်မြင်တိကျသောအစင်းများဖြင့်အလွန်မှတ်မိနိုင်သည်။ The wordmark MAYBACH သည်ခလုတ်ခုံနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လှပစွာပေါင်းစည်းထားသည်။
တော်လှန်သောရှေ့မီးအလင်းရောင် DIGITAL LIGHT ကိုရရှိနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်လမ်းညွှန်ချက်များကိုစီမံခြင်းသို့မဟုတ်ရှေ့လမ်းပေါ်ရှိသတိပေးသင်္ကေတများစသည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုခွင့်ပြုသည်။ Headlamp တစ်ခုစီတိုင်းတွင် DIGITAL LIGHT တွင်အလင်းအမှောင်နှင့်အလင်းရောင်အားဖြင့်အလင်းရောင်သုံးနိုင်သည့်အလင်းရောင်သုံးခုပါ ၀ င်ပြီး ၃.၃ သန်းမိုက်ခရိုမှန်များဖြင့်ညွှန်ပြသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများ - တစ်ခါတစ်ရံတွင်နံပါတ်များသည်စကားလုံးတစ်ထောင်ကျော်ပြောဆိုတတ်သည်။
MBUX (Mercedes-Benz အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ) သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိရန်နှင့် ပို၍ ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိရောက်မှုရှိသည်။
ဆိုင်းငံ့မှု: အံ့သြဖွယ်သွက်လက်နှင့်အတူအဆင်ပြေ setup ကို
အသံပိုင်းဆိုင်ရာသက်တောင့်သက်သာရှိမှု - အလွန်တိတ်ဆိတ်။ တုန်ခါမှုနည်းသည်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွက်အနာဂတ်ရဲ့ဇိမ်ခံမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခြင်း
Mercedes-Maybach S-Class တွင်ဘီးများတပ်ထားသည် ၁၈ စင်တီမီတာ ရှည်သော Mercedes-Benz S-Class ထက် ၃၃၁၆ မီလီမီတာထက် ၃၃၉၆
တက်ကြွသောပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းရောင်အားလုံးတွင်ရှိသည် 253 အယ်လ်အီးဒီ.
တက်ကြွသောလမ်းဆူညံသံလျော်ကြေးပေးမှု၏တန်ပြန်သည့်အသံအချက်ပြမှုများသည်လူ့နားကိုပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းသို့ရောက်ရှိရမည် သုံးမီလီစက္ကန့် ယာဉ်မှထုတ်လုပ်သောဆူညံသံကိုဖုံးအုပ်ရန်။
နောက်ဘက်လက်မောင်းရှိအအေးခန်းအခန်း၏အပူချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည် +1 သို့ +7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်.
ကားမောင်းသမား၏နေရာတွင်ကားရှေ့ထိုင်ခုံ၏ကျောဘက်ကို Chauffeur အထုပ်နှင့်အတူရှေ့သို့စောင်းနိုင်သည် 23 ° 90 °အနေအထားထက်ကျော်လွန်။ ထိုင်ခုံ၏ longitudinal နှင့်အမြင့်ညှိနှိုင်းမှုကနောက်ဘက်တွင် legroom ပိုမိုဖန်တီးပေးသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်စတင်ပြီးကတည်းကထက်ပိုသည် 60,000 Mercedes-Maybach S-Class Sedan ၏နမူနာများကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
ဆေးဆိုင်တွင်အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောဆေးသုတ်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြာနိုင်သည် 1 အပတ်က.
အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသောအခါ, PRE-SAFE Impulse Side နှင့်ခါးပတ်အိတ်များပါ ၀ င်ပါက Mercedes-Maybach ၏အတွင်းပိုင်းတွင်စုစုပေါင်း ၁၈ ခု.
Mercedes-Maybach S-Class ၏အတွင်းပိုင်းသည် Mercedes-Benz S-Class အသစ်၏တော်လှန်ရေးဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ dashboard, center console နှင့် armrests တို့၏ထုထည်ကြီးမားလှသည့်အတွင်းပိုင်းရှုခင်းအပေါ်တွင်မျောနေသည်။ Mercedes-Maybach S-Class တွင်လည်းဒီဂျစ်တယ်နှင့် analog ဇိမ်ခံပစ္စည်းသည်သဟဇာတဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်ငါးခုအထိရနိုင်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်အရအဆင့်မြင့်နည်းပညာထိန်းချုပ်မှုစင်တာတစ်ခုအနေဖြင့် ၁၂.၈ လက်မ OLED ဗဟိုမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများကိုသုံးဖက်မြင်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်သိသိသာသာအနက်နှင့်အရိပ်သက်ရောက်မှုများဖြင့် ၁၂.၃ လက်မ 12.8D ယာဉ်မောင်းမျက်နှာပြင်ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
Exclusive display mode ရှိကားမောင်းသူမျက်နှာပြင်၏ထူးခြားသောအသွင်အပြင်သည် Mercedes-Maybach ၏အထူးအခြေအနေကိုပြသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိရိယာများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ရွှေရောင်ရွှေရောင်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
ဤအရောင်အားတက်ကြွသောပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းရောင် (optional equipment) အတွက်အသုံးပြုသည်။ rosé gold white နှင့် amethyst အလင်းရောင်ဖြင့်တက်ကြွသောပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းရောင်တွင်အရောင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဂန္တ ၀ င်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ အင်္ဂါရပ်အသစ်များမှာရှေ့ထိုင်ခုံများတွင်နေရာချခြင်းနေရာများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသစ်သားပတ် ၀ န်းကျင်သည်ရှေ့ထိုင်ခုံ၏နောက်ဘက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ ပထမတန်းစားနောက်ဘက်ကိုသတ်မှတ်ပါကနောက်ဘက်ခရီးသည်နှစ် ဦး အကြားအလားတူဒဏ်ခတ်နိုင်သောareaရိယာကိုနေရာချလိမ့်မည်။
ဘတ် Huawei သည်၎င်း၏ China flagship Stores တွင် SERES SF5 Car အသစ်ကိုစတင်ရောင်းချသည်
Mercedes-Maybach S-Class ၏ပိုင်ရှင်အားနောက်ဘက်တွင်ထိုင်ခုံတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်ကိုရှင်းလင်းသောညွှန်ပြချက်များမှာဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ရှိစံသတ်မှတ်ထားသည့် Executive ထိုင်ခုံများနှင့် Chauffeur အထုပ်များဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော MBUX ၏ဒုတိယမျိုးဆက် (Mercedes-Benz အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ) သည် S-Class အသစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ MBUX ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာကျယ်ပြန့်သောယာဉ်စနစ်များနှင့်အာရုံခံဒေတာများနှင့်အတူ၎င်း၏ကွန်ယက်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ငါးခုအထိ Brilliant display များသည် OLED နည်းပညာနှင့်အတူယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
MBUX Interior Assist သည်လူနေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောအလိုအလျောက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက် ဦး တည်ချက်၊ လက်ဟန်အမူအရာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ Mercedes-Maybach S-Class သည်ခေါင်မိုးအတွင်းမှ 3D လေဆာကင်မရာများ သုံး၍ အနောက်ခန်းမှလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမူအယာများကိုလည်းမှတ်သားနိုင်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက် Mercedes-Maybach S 680 4MATIC ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ 12 hp (630 kW) ရှိသော V463 အင်ဂျင်ဖြင့် S 680 4MATIC သည် Mercedes-Benz အစုရှယ်ယာတွင်နောက်ဆုံးရရှိသောဆလင်ဒါ ၁၂ လုံးအင်ဂျင်ကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
All- ဘီး drive ကိုစံပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်သော damping ADS + ပါသော AIRMATIC လေကြောင်းလိုင်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ DYNAMIC SELECT ကို အသုံးပြု၍ ယာဉ်မောင်းသူသည် powertrain၊ ESP, suspension နှင့် steering ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတစ် ဦး ချင်းပြုပြင်နိုင်သည်။
နောက်ဘက် ၀ င်ရိုးစတီယာရင်သည်မြို့ပြဒေသများတွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤသည်လှည့်စက်ဝိုင်းနီးပါးနှစ်ခုမီတာအားလျော့နည်းစေသည်။ သုံးစွဲသူများသည် ၄.၅ ဒီဂရီနှင့်နောက်ဘက် ၀ င်ရိုး ၁၀ ဒီဂရီကြားတွင်ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ၁၃.၁ မီတာအစား ၁၂.၂ သို့မဟုတ် ၁၁.၂ မီတာဖြစ်သည်။
၄၈ ဗို့ရှိအခြေခံအပြည့်အဝတက်ကြွသော E-ACTIVE ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုရပ်ဆိုင်းမှုသည်စူပါကင်မရာကို အသုံးပြု၍ undulations ကိုချောမွေ့စေရန်ရှေ့လမ်းကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ ဘေးတိုက်တိုက်မိလျှင်၎င်းသည်ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုပေးသည်။
ဇိမ်ခံ sedan အသစ်သည် S-Class မျိုးဆက်သစ်၏ကောင်းမွန်သော NVH စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထပ်မံတိုးတက်စေသည်။ တိုးချဲ့ထားသော NVH အစီအမံများသည်နောက်ဘက်အပိုင်းကိုအကျိုးရှိစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်နောက်ဘီးမုတ်များabsorbရိယာတွင်စုပ်ယူနိုင်သောအမြှုပ်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
တက်ကြွသောလမ်းဆူညံသံလျော်ကြေး (AFGK) ကိုကုမ္ပဏီမှပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသည်။ counter-phased sound wave များကို အသုံးပြု၍ system သည်မလိုလားအပ်သော low-frequency ဆူညံသံများကိုလျော့နည်းစေသည်။
အထူးသဖြင့် Mercedes-Maybach S-Class တွင်အနောက်ဘက်ရှိလုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုပြုခဲ့သည်။ ဆန်းသစ်သောနောက်လေအိတ်တစ်ခုကဤအချက်ကိုပြသည် - ပြင်းထန်သောတိုကျရိုကျတိုက်မှုများ၌ဤထပ်ဆောင်းကိရိယာများသည်ထိုင်ခုံခါးပတ်၏လည်ပင်းများနှင့်လည်ပင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
နေ့စဉ်မောင်းနှင်မှုတွင်ကားအသစ်များနှင့်တိုးချဲ့အကူအညီများသည်ယာဉ်အမြန်နှုန်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း၊ အကွာအဝေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဒါကကားမောင်းသူကိုကြာရှည်စွာနိုးနိုးကြားကြားရှိနေစေပြီး ဦး တည်ရာကိုပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Mercedes-Maybach သည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအတွက်ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mercedes-Maybach သည်ဇိမ်ခံကားနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားမှုအပေါ်သမိုင်းကြောင်းအရပြောင်းလဲမှု၏နားလည်မှုကို အခြေခံ၍ အနာဂတ်၏ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းအသစ်ပြန်ဆန်းသစ်ခဲ့သည်။ Mercedes-Maybach သည်ခေတ်မီဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုယခင်ကထက် ပို၍ ရရှိခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ထိပ်တန်းအဆင့်နည်းပညာနှင့် Mercedes-Benz ၏အရည်အသွေးကိုပေါင်းစပ်ပြီးအထူးသဖြင့် MAYBACH ၏ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Mercedes-Maybach S-Class အသစ်သည် Mercedes-Benz နှင့် Maybach အမှတ်တံဆိပ်များ၏ထူးကဲသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမော်ဒယ်များကိုလိုက်နာသည်။ Maybach Motorenbau GmbH သည် ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင်ဘာလင်မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲတွင် Maybach Model W1921 ကို Cannstatt ရှိ Auer ၏နည်းပြနည်းဖြင့်ပထမဆုံးမော်တော်ကားကိုပြသခဲ့သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်၊ Mercedes-Maybach S-Class ထုတ်လုပ်မှုကိုဇွန်လတွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံး ၀ ယ်ယူသူများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော သင်၏စီမံကိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆော့ (ဖ်) ဝဲအိမ်အားမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
နောက်တစ်ခု HUAWEI Mate 40 Pro ကြိုတင်မှာယူမှုများနှင့်အတူကြီးမားသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုကြေညာရန် Huawei တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရောင်းချခြင်း